ပဲနံ Reloaded | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ပဲနံ Reloaded
Posted by ムラカミ on Feb 19, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Marketing, Members | 36 comments
ဗိုလ်​ချုပ်​​မွေး​နေ့ ပဲနံဂယက်​ ​နောက်​ဆက်​တွဲ ဆိုပါ​တော့ဗျာ
​ကျော်​ တင်​တဲ့ပိုစ့်​ထဲမှာ​တောင်​ပါ ပါတယ်​
သူအကြိုက်​ဆုံးမုန့်​မို့ သူ့​မွေး​နေ့မှာ ပဲနံ ​ကျွေးတယ်​လို့
သည်​​နေရာမှာ နည်းနည်း ​ပြောစရာရှိသွားပြီ ခင်​ဗျ
ဗိုလ်​ချုပ်​ကလည်း my favourite snack ဆိုပြီး အင်​တာဗျူးခဲ့တဲ့ အ​ထောက်​အထားကလည်း မကျန်​ဘူးမလား
အချိန်​အခါအရ အဖြစ်​နိုင်​ဆုံး နဲ့ အသင့်​​တော်​ဆုံး အစားအစာ ကိုမှာခဲ့တာ​ရော မဖြစ်​နိုင်​ဘူးလား
အကြိုက်​ဆုံးမဟုတ်​ဘဲ သမိုင်းတွင်​​နေတာ​ရော မဖြစ်​နိုင်​ဘူးလား ?
ကျုပ်​​တော့ အနှီလား​ပေါင်းများစွာနဲ့ စာ​တွေပြန်​ဖတ်​ကြည့်​မိ​တော့
တခါသား ဗိုလ်​ချုပ်​က လမ်း​ဘေးမှာ အ​ကြော်​၀င်​စားတဲ့အ​ကြောင်း​လေး ဖတ်​ရတယ်​ဗျာ
ကျ​နော်​တို့ ဗိုလ်​ချုပ်​​မွေး​နေ့ အ​ကြော်​ပြိုင်​ပွဲ အ​ကြော်​စားပြိုင်​ပွဲ​တွေ လုပ်​ပြီး​တော့​ရော ဂုဏ်​ပြုလို့ရတာပဲ​ညော်​
​နောက်​စာတခုမှာကျ ဗိုလ်​ချုပ်​က သူ့တပည့်​ကို လကုန်​ရက်​မို့ ဘဲဥနဲ့စားခဲ့လို့ ထမင်းစားမ​ကောင်းတာ​ကြောင့်​ ဆိတ်​သားကပတ်​ စားချင်​တယ်​ ဆိုတာ​လေးပါတယ်​ဗျာ
ကျ​နော်​တို့ No egg day ဆိုပြီး ဂုဏ်​ပြုဦးမလား
ဥကို cross ခြစ်​ထားတဲ့ တီရှပ်​​တွေ နှဖူးစီး​တွေ ရိုက်​ဦးမလား ရ​သေးရဲ့
​နောက်​စာ​တပုဒ်​ထဲမယ်​ ကားပျက်​လို့ ဗိုလ်​ချုပ်​က ကိုယ်​တိုင်​ဆင်းတွန်းတယ်​ဆိုတာ ပါသဗျ
ကျ​နော်​တို့ နိုင်​ငံတ၀ှမ်း ကားတွန်းပြိုင်​ပွဲ​တွေကျင်းပပြီး​တော့လည်း ဂုဏ်​ပြုနိုင်​​သေးရဲ့
မှတ်​ချက်​ ။။ ကာတွန်းမဟုတ်​ပါ
ကျန်​​သေးသဗျ ။ ဗိုလ်​ချုပ်သုံးခဲ့ ကျန်​ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်း​လေး​တွေ ပြထားတာကြည့်​မိ​တော့ သူသုံးခဲ့ပါတယ်​ ဆိုတဲ့် မီးခြစ်​​လေးသွားသတိထားမိတယ်​
အနှီမီးခြစ်​က​လေးနဲ့ ပုံစံတူထုတ်​ ဗိုလ်​ချုပ်​ပုံကပ်​ပြီး ​ရောင်းလို့ ဖြန့်​လို့ ရ​သေးသဗျာ သူ့​မွေး​နေ့မှာ
​နွေအခါမယ်​ မီးပျက်​တတ်​တယ်​မလား ညဘက်​​တွေ​မှောင်​တဲ့အခါ ဖ​ယောင်းတိုင်​ထွန်းဖို့ အနှီမီးခြစ်​က​လေး ခြစ်​ဂတဲ့အခါ
ကွက်​တိ အံ့ကိုက်​ ဇလုပ်​တိုက်​ အ​မှောင်​ခွင်းပြီးအလင်း​ဆောင်​တဲ့ ဒို့ဗိုလ်​ချုပ်​
​နောက်​တနည်းစဉ်းစားရင်​ ​ဈေးကွက်​ထဲက တီလုပ်​ထုတ်​မီးခြစ်​ဇုတ်​​တေ်ွရြဲ့ မားကတ်​ရှယ်​ယာကိုလည်း အထိုက်​အ​လျောက်​ ကန့်​သတ်​ပီးသားဖြစ်​မ​ပေါ့ဗျာ
တီလုပ်​ဆိုလို့ ဗိုလ်​ချုပ်​ ကြိုက်​တတ်​စားတတ်​တဲ့အထဲမယ်​ တီလုပ်​စာ မ​တွေ့မိသလိုပဲဗျ ဖတ်​ဖူးသ​လောက်​​ပေါ့
ပဲနံ​လောက်​နဲ့ ရပ်​မ​နေဂျပါနဲ့ ကိုယ့်​ဆြာတို့
ဗိုလ်ချုပ်က တီလုပ်စာတွေ မကြိုက်ဖူး
အစားအစာတို့ဘာတို့နဲ့ ဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုကတည်းက လွဲတာနော့
အမှန်က အဲ့ါတွေထက် အရေးကြီးတာက
သူ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ သူ့စကားတွေကို လိုက်နာပြီး
နောက်ပြီး သေပြီးသားလူကို တမ်းတစွဲလမ်းပြီး
မမေ့နိုင်ဘဲ တသသ အမှတ်တရ လုပ်တာလည်းလုပ်ပေါ့။
တကယ်က. . .
သူ ဖြစ်စေချင်တာကို ဖြစ်အောင်
လက်ရှိ ဦးဆောင် လုပ်ပေးမယ့်
သူ့ကို ဂုဏ်ပြုရာ ရောက်တယ်
မားကတ္တင်းပိုစ့်​​တွေ မ​ရေး​တော့ဝူးလားဆိုတဲ့ ပိတ်​သတ်​ယီး အတွက်​ပါ​အေ
ဒါနဲ့ ဗိုလ်​ချုပ်​မှာ စိနပြည်​​ခေါင်း​ဆောင်​ထဲက မိတ်​​ဆွေရှိတယ်ို့မကြားဖူးဘူး
ဗြိတ်​သျှကျွန်​ တူတူဖြစ်​ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်​ချင်း ​သွေးနီးတာလည်းပါမယ်​ထင်​ပါရဲ့
.ခိခိ..ကျုပ်မှာအထောက်အထားရှိသဗျ…ဗိုလ်ချုပ်က တီလုပ်​စာ စားပါသဗျ :))
….ဆိုတော့ကာမယ်..၀က်အူချောင်း စတုဒီသာပွဲ​တွေကိုလည်း မ​မေ့စ​ကောင်းဘူးဗျ
•	May 4, 2011 ရက် ၊ 5:29pm တွင် မျိုးချစ်သူ ရေးသားခဲ့သော ဘလော့ဖြစ်ပါသည် ။
မိုးတွေရွာနေတဲ့ တစ်နေ့မှာပေါ့ ကားပေါ်မှဆင်းကာ ထီးအစုတ်ကလေးတစ်ခုကို ရဲဘော်လေး ကိုထွေးက ဗိုလ်ချုပ်အားမိုးပေး၍ ၀န်ကြီးများရုံးထဲသို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်။
ရုံးသို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် စားပွဲပေါ်တွင်ပုံနေသောအလုပ်ပုံကြီးနှင့် အရေးကြီး နိုင်ငံ့တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေရသည်ဖြစ်၍ နေ့လည်စာကိုပင် မွန်းလွဲနှစ်နာရီထိ စားဖို့ပင် သတိမရနိုင်ပဲ ဖြစ်နေပါသည်။ မနက်ပိုင်းကလဲ စားနေကျပဲပြုတ်နဲ့နံပြားလေးကိုစားပြီး ရုံးတက်ခဲ့ရပါသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်နေ့လည်ထမင်းစားဖို့တော်တော်လေးအချိန်လွန်နေပါပြီစားပြီးမှပဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါလားဗိုလ်ချုပ်ရယ်” ဟု မောင်နေ၀င်းက စိုးရိမ်တကြီးပြောနေရှာသည်။ ထိုကဲ့သို့ သတိပေးလိုက်မှပင် ထမင်းစားဖို့သတိရပြီး
“ဟေ ဟုတ်လား ဒါဆိုလဲ အိမ်ပြန်စားတာပေါ့”
“အပြင်မှာ မိုးတွေအရမ်းရွာနေပါတယ် ဗိုလ်ချုပ် ကျွန်တော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီး မှာပေးပါ့မယ် ဧည့်ခန်းထဲမှာပဲ သုံးဆောင်လိုက်ပါလား”
“ဆိုင်ကို မှာစားရင် ငါပိုက်ဆံကုန်မှာပေါ့ ဒီလအတွက် ငါပြတ်တော့မယ်၊ မဖြစ်ပါဘူး အကြည် လက်ရာလေးပဲ အိမ်ပြန်လွေးလိုက်ပါတော့မယ်ကွာ” ဟုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ထထွက်လာခဲ့ပါသည်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ မိုးရွာကြီးထဲ မောမောပန်းပန်းနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သားသမီးသုံးယောက်ရဲမျက်နှာလေးတွေမြင်တော့လဲ နွမ်းခဲ့သမျှ လန်းလာပါတော့သည်။
“အကြည်ရေ ထမင်းစားဖို့ ပြင်ပါဦးကွာ ”
“အဆင်သင့်ပါပဲရှင်၊ကိုအောင်သန်းလဲ ရောက်နေတယ် ”
ကိုအောင်သန်းအနေနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ထမင်းစားချိန်မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရောက်နေတော့ ဗိုလ်ချုပ်စားမည့်ထမင်းဝိုင်းကို ကြည့်လိုက်မိပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အနေနှင့် ဤထမင်းဝိုင်းပြင်ဆင်ထားပုံမှာ မထူးဆန်းလှပါ။ သို့သော်လဲ ကိုအောင်သန်းအတွက်မူ တော်တော်လေးကို မှင်သက်အံ့သြမိသွားပြီး ရင်ထဲမှာ စို့ခနဲဖြစ်သွားကာ ဗိုလ်ချုပ်အားတော်တော်လေး သနားသွားမိကာ ပိုပြီးတော့လဲ လေးစားသွားပါတော့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်စားမယ့်ထမင်းဝိုင်းမှာ ထမင်းတစ်ပန်းကန်နှင့် ဟင်းတစ်ခွက်သာပါ ပါသည်။ထိုဟင်းမှာလဲ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာမဟုတ် လက်တစ်ဆစ်မရှိတရှိ ၀က်အူချောင်းကြော်ကလေးငါးဖတ်သာဖြစ်ပါသည်။
အချိန်ရှိသရွေ့ နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသည်မို့ မိသားစုနှင့်အတူနေရသည်ဆိုသည်မှာ တော်တော်လေးကို ရှားပါသည်။
ဤကဲ့သို့ထမင်းစားချိန်တွင်သာဖခင်အနားကပ်ရရှာသော သားနှစ်ယောက်နှင့်သမီးလေးခမျာ တီတီတာတာနှင့်ထမင်းဝိုင်းနားတွင်ရှိနေပါသည်။
ဒီလိုနဲ့ စ စားတော့မည် ဟန်ပြင်လိုက်သည်တွင် သမီးလေး အောင်ဆန်းဆုကြည်က “သမီးကိုတစ်ခုလောက်”ဒီင်္လိုနဲ့တစ်ဖက်ရော့သွားပြန်ပါကော
ကဲသမီးလေးကိုကျွေးလိုက်တော့ အောင်ဆန်းလင်းကလဲ “သားကိုလဲ ကျွေးပါဦး” ကဲ ၀က်အူချောင်းလေး သုံးဖတ်သာကျန်ပါတော့သည်။
“သားကိုကော မကျွေးတော့ဘူးလားဖေဖေ” ကဲ ဒီလိုဆိုတော့ နှစ်ဖတ်ပဲကျန်တော့တာပေါ့။
ဒီဝက်အူချောင်းလေးနှစ်ချောင်းထဲကျန်တော့တာတောင် “အစ်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလက်ဆုံ နွဲသွားပါဦးလား” တဲ့ဗျာ။
ကိုအောင်သန်းခမျာသူ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့သူ့ဇနီးသည်ကို “တို့တွေပိုက်ဆံပိုရင် ငါ့ညီအောင်ဆန်းတို့အိမ်ကိုမျှပေးလိုက်ပါဦးကွာ ငါ့ညီကဒီနိုင်ငံမှာဘုရင်ခံပြီးရင် သူကအာဏာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပါကွာ သူ့ထမင်းဝိုင်းကိုကြည့်ပြီး ငါစိတ်တွေမကောင်းလွန်း လို့ပါ”ဟုဆို၍
ဗိုလ်ချုပ်ထမင်းဝိုင်းကလေးကို ပြန်မြင်ယောင်ကာပြောပြနေရင်း မျက်ရည်ပင်ဝဲမိပါသည်။
“နိုင်ငံအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာမွဲသထက်မွဲဖို့ပဲရှိတယ်၊ချမ်းသာသထက်ချမ်းသာလာရင်တော့ အဲ့ဒါ နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကိုခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာနေတဲ့အောက်တန်းကျစိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင် လူလိမ် အတ္တသမားတွေပဲ”
အဲ့​နေ့ကျရင်​ ထမင်းတနပ်​ ၀က်​အူ​ချောင်း ၂​ချောင်းတည်းနဲ့ ထမင်းစားပြီး ဂုဏ်​ပြုမို့လားဟင်​င်​
.ထမင်းတစ်ပန်းကန်မောက်မောက်ကို လက်တစ်ဆစ်လောက် ၀က်အူချောင်းနှစ်ဖတ်နဲ့စားပြိုင်ရမှာ
.ဒေါ်စုကိုလည်း မလောက်တဲ့ကြားက ဖအေ့ဝက်အူချောင်းတောင်းစားလို့..ဆန့်ကျင်ဂျ
ဒေါ်စုကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ချက်ကောင်းတွေ့ပြီ
ဘယ့်နှယ် ထိန်းမနိူင်သိမ်းမရ ပဲနံရောဂါထ ၊
လုပ်သင့်တာတွေကြတော့ မေ့သယောင်ဆောင် ၊
စိန့်ပြည်.. ဟိုင်နန်ကျွန်းကို.. စိန့်တိုင်းသားဟန်ဆောင်သွားတာ.. ဟိုမှာယောင်ချာချာနဲ့တော်တော်ကြာသောင်တင်နေတယ်လို့.. ဆိုတာမို့.. အဲဒီအစာတွေစားမှာဖြစ်သလို.. ဂျပန်မှာလည်း.. ကြာသမို့.. လမန်င်လဲ..ဆွဲမှာပါပဲ..
ရန်ကုန်ကစစ်ရုံးဝင်းကြီးထဲ.. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဒေါ်ခင်ကြည်ကိုလိုက်တဲ့နေရာအကြောင်း.. ရွာထဲကတယောက်ရေးဖူးတာလေး…ရုတ်တရက်သတိရမိတယ်..။
အဲ့သည့်​​နေရာက သံပန်းမှာ ချိတ်​ဆွဲဖို့ ​
လို့​ရေးထားတဲ့ ​သော့​တွေ ထုတ်​​ရောင်းစားဂျဇို့
တိဘူးအေ ညီးပေါက်ရဒေ ၁၃ ကျပ်ပဲယူဒေါ့မယ် ညီးနဲ့ဖက်ပြောချင်ဘု
ဆလု ၁ ခါ – အကြော်
ဆလု ၂ ခါ – ဘဲဥ နဲ့ ဆိတ်​သားကပတ်
ဆလု ၃ ခါ – ကားပျက်​တွန်း
ဆလု ၄ ခါ – မီးခြစ်​​လေး
ဈေးကွက်ထဲ သော့ နဲ့ သော့ခလောက် ရောင်းကောင်း အောင် နည်း ရှိသေးတယ်။
ဂျာမဏီ က တံတားတစ်ခု ပေါ်မှာလေ။
လက်ထပ်ပြီး ပူပူနွေးနွေး စုံတွဲ များ သော့ခလောက် နှစ်ခု မှာ သူရို့ နာမည် ရေး ပြီး တော့ ပူးပြီး အဲဒီ တံတားပေါ် က လက်ရမ်း မှာ ခတ် ကြ သတဲ့။
မြန်မာပြည် မှာ ရော အဲဂလို လုပ်ဖို့ ဘာ တံတား သင့်တော်လဲ မသိ။
မြန်မာပြည် မှာတော့ စီးပွါးရေး အတွက် အတွဲ တွေ ကို လက်ထပ်ပြီး အထိ စောင့်ခိုင်း အနေနဲ့။
ချစ်သူများ နေ့မှာ သော့ခလောက် ချည် ဖို့ ကြော်ငြာ ပေရော့။
ချောကလက် တွေ ပန်းစည်း တွေ က ပျင်းလောက်ရောပေါ့။
အဲ့တံတားမှာ ဘာဇာတ်​လမ်းရှိခဲို့ အမှတ်​တရခတ်​တာလဲမသိ
ကမာကူရ ဘုရားနားက အဲနိုရှိမားကျွန်းမှာည်း သည်​လိုခတ်​တဲ့အကျင့်​ရှိသဗျ သူက​တော့ သမီးရည်းစားစုံတွဲ​တွေခတ်​တာ သံပန်းမှာ ​သော့တံကို တ​ယောက်​တ​ချောင်း ခွဲသိမ်းကြတယ်​​လေ
သူ့သမိုင်းက​တော့ တခါ​ရေးဖူးပါတယ်​ အမတ်​အိမ်​က စာသင်​​တော်​သားနဲ့ အိမ်​​ဖော်​မ​လေးချစ်​ကြိုက်​ကြတာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်​မခံလို့ ကမ်းပါးစွန်းက​နေ ခုန်​ချသတ်​​သေခဲ့တဲ့​နေရာ တဲ့
​​သေသည်​အထိ လက်​တွဲမဖြုတ်​စတမ်း ဆိုတဲ့သ​ဘော​ပေါ့
Cologne’s Love Locks Bridge | Atlas Obscura – ဒါကအရီးလတ်ပြောတာထင်တယ်..။
Case in point: the wall of “Love Padlocks” on display on the Hohenzollernbrücke bridge in Cologne, Germany, painstakingly created piece by piece as an …
Pont Des Arts’ Love Padlocks: A Look At The Most Romantic Spot In Paris (PHOTOS) – ဒါကပြင်သစ်က..
Paris is widely known as the “City of Light,” but it is also known as the city of love. From the Luxembourg Gardens to the Île Saint Louis on the Seine, the French capital city isahaven for passionate affairs that would make Humphrey Bogart blush.
However, there is one spot that stands above the rest of the amorous Parisian locations: the Ponts des Arts. Built in 1804, the nine-arch metallic footbridge isadestination for couples wishing to memorialize their love. Sweethearts from near and far visit the bridge to attach padlocks emblazoned with initials and messages before throwing the locks’ keys into the Seine below.
မြန်မာပြည်မှာ.. ခတ်တည်တည်နဲ့ပုံကူးချပြီးလုပ်ရင်.. ကောင်းမယ်ထင်သဗျ..။
သော့ကုမ္ပဏီတွေလည်းအလုပ်ဖြစ်.. အနီးအနားက.. တိုးရစ်ဇင်လည်းတိုးတက်..
ခက်တာက.. မြန်မာအချစ်ဇတ်လမ်းတွေမယ်.. သော့ပါတဲ့ဇတ်လမ်းကတွေးမရ..
ကျုပ်သိတာကတော့.. ဒွေးမယ်နော်တို့ဇတ်လမ်း.. ( ရေတံခွန်မှာရေချိုးဇတ်လမ်း)
ဟို.. ဦးကျောက်တုံးဆို.. ဗဟုသုတစုံသမို့သိသလားမသိ..။
တာနောယက္ခက သူ့မယားကိုချစ်လွန်းလို့ …
သံကွန်ခြာနဲ့ သော့ခတ်ပြီး ပါးစပ်ထဲမှာ ငုံထားတာ….
ဖေဇော်ဂျီက အလစ်မှာ ဝင်ဥသွားတဲ့ ဇာတ်လမ်း …
သံကွန်​ခြာ ခုနစ်​ထပ်​အုပ်​တာ​တော့ မှတ်​ဖူးပါရဲ့
​သော့ခတ်​တာ​​တော့ မပါပါဘူး အူး​လေးရယ်​
အမ်… သူ့ဇတ်လမ်းက.. သော့ခတ်ရင်းတန်းလန်း.. အလစ်မှာဝင်ဥခံရတာကြီး…
တော်ကြာ.. အဲဒီတံတားမှာ “အချစ်သော့”ခတ်ပါမှ.. ၀င်ဥခံရလို့.. “၀င်ဥခံ”တံတားဖြစ်နေမှဖြစ်..။
အာ ဟ၊ အာဟ
သော့ရောင်းဖို့က နေ ရာဇဝင်ထဲ ဝင်ပြီး ဘီလူး ကို ခံတွင်းနံ့ပျောက်ဆေး ရောင်းရတော့မဲ့ ကိန်းမြင်တယ်။
ဥရောပ သော့ဇာတ်လမ်း တွေ ကတော့ ဘယ် ရာဇဝင် ကို မှီပြီး မှ ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့။
စွန့်ဦးတီထွင်သူ တစ်ယောက် က လုပ်လိုက်တာ က နေ များများ လာပြီး နာမည်ကျော်သွားတာပါဘဲ။
သို့ပေသည့် အခု မှာတော့ သော့တွေ က တံတား အလှ ဖျက်တယ် ဆိုပြီး ကန့်ကွက်သူ တွေ ပေါ်လာပြီး တစ်ချို့ တံတား တွေ ပေါ်မှာ တားမြစ်ထားပြီ ပြောတယ်။
တစ်ချို့ က သော့တံ တွေ ကို မြစ် ထဲ ပစ်ပစ်ချတာ ကိုလဲ မပစ်ရ တားနေရတယ် ပြောတယ်။
မနှစ်က ပဲရစ် မှာ အဲဒီ သော့တွေ လေး လာပြီး တံတားလက်ရမ်း ပြိုသွားတယ်လဲ ကြားတယ်။
အော်ဇီ မှာလဲ တံတား တစ်ခု က သော့ တွေ ကို အစိုးရက ဖြုတ်ပစ်တော့ မယ် လဲ ပြောတယ်
မြန်မာပြည် က တံတား ပုံ နဲ့ ရယ်။ လူ တွေ ကော်ပီကက် မြန်တာ များ တာ နဲ့ ရယ်။
စပြီး ရက်ပိုင်းတောင် ခံ မယ် မထင်။
evil marketer တွေ
ဗိုလ်ချုပ်က အညာသား …. ပဲကြိုက်တာ မထူးဆန်းပါဘူး…
ဒေါ်ခင်ကြည်က အောက်အရပ်သူ (မြောင်းမြ) ဆိုတော့ မုန့်ဟင်းခါးကြိုက်ပါလိမ့်မယ်…
ဂလိုလုပ်… ပဲ နံ နဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကို နေရှင်နယ်ဖြစ်အောင် ဆက်ဆွဲကြပါစို့…
နာလည်းအဲ့ကိစ္စကို တွေးမိတယ် မပြောအားတာ။
ဗိုလ်ချုပ်က ကြည်ရေ ပဲပြုပ်နဲ့နံပြားရရင်စားချင်တယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်းစကားလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ ပဲပြုပ်နံပြားတွေ တတိုင်းပြည်လုံးကျွေး အစိုးရကျောင်းတွေကအစကျွေး
ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ များများဖြစ်နေတယ်။
အကုန်အကျသိပ်မများ တာရယ် လူကြိုက်များတတ်တာရယ် အားသာနေတဲ့အတွက် အထိမ်းအမှတ်တစ်ခု ဆင်တူလုပ်လိုက်ကြတယ်လို့ပဲတွေးပါတယ်။
နင် ရိုက်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ရှင်တော့ ရပ်လိုက်သင့်ပြီ။
ယိုရှီဒါ ရှာထုတ်​ခံ says:
ရွာသူား​တွေမြင်​ဖူး​အောင်​ ပ​လော့​လေး​တေ ကူးပြ​ပေးပါလားညင်​င်​
ကိုယ့် ပလာတာကိုယ် ကူးပြလိုက်။
​ကျော်​ က ဖုန်းနဲ့မို့ပါ​အေ
သူ့ဥာဏ် မီသလောက်လေး ဂုဏ်ပြုကြတာပေါ့ကွယ်…။
ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြား ရဲ့ image က နှိမ်ချ တဲ့ သဘောတွေပါတော့
ဟမ်ဘာဂါ ၂ လုံးလောက်နဲ့ မိုင်လို ပူပူလေး တစ်ခွက်လောက်ရရင်
အဲ့ဒီစာလည်း အခုလို ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်…မထင်…။
အမိန့်ပေးသံမပါတဲ့ ( ရရင် စားချင်တယ် ) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း…၊
စားချင်တာကလည်း ( ပဲပြုတ် နဲ့ နံပြား ) ဆိုတဲ့ အခြေခံလူတန်းစား အစားအစာ…။
အိမ်မှာ ဒလို စာရေးမလားလို့…။
ဒါဘယ်ဘလက် နဲ့ ၀က်ခေါက်ကင် ကျွတ်ကျွတ်လေး ရရင်
ဟေးဟေး…သနပ်ခါးတုံးနဲ့ အပေါက်ခံရမှာ မြင်ယောင်သေး…။
Evidence တို့ use black & white တို့ ဘီလောက်အရေးကျီးသလဲဆိုဒါ…
နာ စားချင်တာတွေ ပြောထားတဲ့ Evidence တွေ လူတိုင်းမှာ ရှိနေတယ်။
အော့.. ဘာနဲ့အမှတ်တရလုပ်ရမဲဆိုဒဲ့ အဗီးဒန့်ပါထားဂဲ့
နာ ကျည်ဆံ ၁၃ ချက် မပြောနဲ့
မျက်စောင်း တစ်ချက်တောင် ခံနိုင်ရည်မရှိသေးပါဘူးဆို။
(၂) စစ်ပြီးစအချိန်.. ရန်ကုန်မြို့ မှာ “ဖာလူဒါ” နာမည်ကြီးတဲ့ အအေးဆိုင်တစ်ခုရှိပါတယ်.. ဖေဖေက ဘုရင်ခံကောင်စီဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီး မကြာမီ လခထုတ်ရက်မှာ မိသားစုတွေ အဲဒီအအေးဆိုင်မှာ ဖာလူဒါသွားသောက်ကြတယ်.. အဲဒီတုန်းက ဖာလူဒါခွက်တွေက အကြီးကြီးတွေပါ.. မလိုင်တွေ ကြက်ဥပူတင်းဖတ်တွေ ဖာလူဒါစေ့တွေ နှင်းရေတွေနဲ့ တစ်ပွဲဆိုတစ်ဝကြီးပါပဲ.. ကလေးတွေအပါအဝင် အားလုံး တစ်ယောက်တစ်ခွက်မှာလိုက်တော့ တစ်နှစ်ကျော် ကျွန်မအပါအဝင် ကလေးတွေကလည်း တစ်ခွက်စီရပါတယ်.. လူကြီးတွေသောက်လို့ကုန်ပေမဲ့ ကလေးတွေကတော့ ဘယ်ကုန်မှာလဲ.. ကလေးတွေ ဖန်ခွက်ထဲမှာ ကျန်နေတဲ့ ဖာလူဒါတွေကို မေမေက တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် သောက်လိုက်ပါတယ်.. အစားနည်းတဲ့ ဖေဖေက မေမေ့ကို အံ့ဩတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ပြီး ပြောတယ်တဲ့..
“သခင်ဗစိန်ကြီး ဝက်သားတစ်ပိဿာချက်ရင် သူမြည်းတာနဲ့ပဲ ကုန်တယ်” တဲ့.. ကြီးတော်ကြီးက ဒီလိုပြောတာကို သဘောကျမဆုံးပါဘူး.. “သူ့မိန်းမ အစားကြီးတာကို ဘယ်နဲ့ သခင်ဗစိန်ကြီးဘက် မျှားဦးလှည့်သွားရလည်း” ဖေဖေက ဘုကျကျနဲ့ သွေးထွက်အောင်မှန်တဲ့ ဒဲ့ဒိုးစကားတွေ ပြောတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ မေမေ့ကိုကျတော့ နူးညံ့နေတာကို ကြီးတော်ကြီးက အတော့်ကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်..
တကယ်တော့ ဖေဖေ့စိတ်က နူးညံ့ပါတယ်.. အစားအစာအကြောင်းပဲ ဆက်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ မေမေ့ကို စိတ်ရှုပ်အောင် မလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူး.. မေမေက ငယ်ငယ်ထဲက အချက်အပြုတ်ဝါသနာ မပါတော့ ဘာမှ မချက်တတ်ပါဘူး..(ဒါကြောင့် ကျွန်မကိုတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းကပဲ သင်တန်းလွှတ်ပြီး အချက်အပြုတ်သင်ခိုင်းတာ ထင်ပါတယ်).. ဖေဖေကလည်း ဘယ်တော့မှ ချေးမများပါဘူး.. ရှေ့မှာချပေးတာကို ခေါင်းငုံ့စားတာပါပဲ.. အညာသားဆိုတော့ မေမေတို့ အောက်ပြည်က အစားအစာအချိူ့ ကို သိတ်မကြိုက်ပေမဲ့ ကျွေးရင်စားတာပါပဲ..
ဖေဖေ့အစ်ကို ဦးအောင်သန်းကဆိုရင် အိမ်ကိုလာလယ်လို့ တညင်းသီးချက်ထားတဲ့ အနံ့ရတာနဲ့ ပြေးတာပဲတဲ့.. ဖေဖေကတော့ မကြိုက်ပေမဲ့ စားရှာတယ်.. “ဖေဖေကြိုက်တာကတော့ ဆိတ်ကလီစာဟင်း” တဲ့.. အိမ်မှာ ဆိတ်ကလီစာချက်တိုင်း ဒါ ဖေဖေအကြိုက်ဆုံးဟင်းဆိုပြီး သတိတရပြောတာ ကျွန်မကလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံးပါပဲ.. ကလီစာထဲမှာ မျက်နှာသုတ်ပဝါကို ဖေဖေအကြိုက်ဆုံးဆိုတာလည်း သိရပါတယ်.. ကျွန်မမိတ်ဆွေတွေကို ပြောပြတော့ ရယ်ကြတယ်.. ပုဆိုးကြမ်းကိုဆိုတာနဲ့ တူတယ်လို့ ပြောကြတယ်.. ကျွန်မတို့ကတော့ မျက်နှာသုတ်ပဝါလို့ပဲ သိပါတယ်..
နောက် ဖေဖေက တစ်ခါတလေ “ငရုတ်သီးဟင်း စားချင်တယ်ပြောတာ” ဘယ်လိုဟင်းမျိူးမှန်း မသိလို့ မကျွေးနိုင်ခဲ့တာကို မေမေက ဝမ်းနည်းစွာပြောဖူးတယ်.. ကျွန်မကလည်း ဒီ “ငရုတ်သီးဟင်း” ရှာပုံတော်လုပ်တာ အသက်အတော်ကြီးမှပဲ တောင်တွင်းကြီးဇာတိ ညီမတစ်ယောက် ချက်ကျွေးလို့ စားဘူးဖြစ်တော့တယ်..
*ရိုးရိုးသားသား နေခဲ့တဲ့ ဖေဖေနဲ့မေမေကို
၂၃- ၂- ၂၀၁၅..
သခင်အောင်ဆန်း.. အကြိုက်ဆုံးဟင်းမှာ.. ဆိတ်ကလီစာဟင်းဖြစ်သည်လို့.. မှတ်ထားရတော့မယ်ပေါ့..။
ငရုပ်ပွတွေကို.. နှပ်တာလား.. ဘာလား.. ?
ဒီမှာ လာကြည့် သဂျီး
၂၃.၂.၂၀၁၅ နေ့ ထွက်ရှိသော ဒီလှိုင်းစာစောင်ပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဒီစကားထဲတွင်..
” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဖေဖေက တစ်ခါတလေ “ငရုတ်သီးဟင်း” စားချင်တယ်ပြောတာ ဘယ်လိုဟင်းမျိူးမှန်း မသိလို့ မကျွေးနိုင်ခဲ့တာကို မေမေက ဝမ်းနည်းစွာပြောဖူးတယ်”..
” ကျွန်မကလည်း ဒီ ” ငရုတ်သီးဟင်း ” ရှာပုံတော်လုပ်တာ အသက်အတော်ကြီးမှပဲ တောင်တွင်းကြီးဇာတိ ညီမတစ်ယောက် ချက်ကျွေးလို့ စားဘူးဖြစ်တော့တယ်”
ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကွန်မန့်ထဲမှာ မေတ္တာ စေတနာထားကာ ဦးဟန်တင် ဆိုသူမှ “ပုံနှင့်တကွ ချက်နည်း”ကို ဖော်ပြရေးသားပေးခဲ့ပါတယ်.. ပြန်လည်၍ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ..
” ကြက်သွန်နီရွနေအောင် ဆီသတ်.. ပုဇွန်- ဆား- နနွင်း- ငြုပ်သီးစိမ်းထောင်းပြီးသား.. ခရမ်းချဉ်သီးထည့်မွှေပြီး ခဏအုပ်ထား..
ဆီပြန်လျှင် ပုဇွန်ငါးပိ ရေဖျော်ပြီးထည့်.. ရေတန်ဖတ်တန်မှာ နံနံပင်ထည့်.. တို့စရာကတော့ စုံလေ ကောင်းလေပါပဲ”
ဒို့က​တော့ အညာသားပါပဲ ပဲ​တော့ ကြိုက်​ပါရဲ့ ။ နံပြား​တော့မကြိုက်​ ။ မုန့်​လုပ်​နည်းကွာလို့နဲ့ တူပါရဲ့ ။ ပီး​တော့ ခုလက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​​တွေမှာကလည်း နံပြား​ရောင်းတဲ့ ဆိုင်​မ​တွေ့မိသ​လောက်​ ။ အရင်​က တစ်​ဆိုင်​ရှိဖူး​သေးတယ်​ ။ အဲ့ ဆိုင်​က နံပြားက ပြာ​တွေလူး​နေတာချည့်​ပဲ ။ မ​ရောင်းဆို သူ့အတွက်​သီးသန့်​ ဖိုလုပ်​ရ​သေးတယ်​​လေ ။ အဲ့ ဖိုက နံပြားကလွဲပြီး ဘာမုန့်​မှ လုပ်​လို့မရတာလဲ ပါမယ်​နဲ့ တူရဲ့ ။ အဲ့​တော့ လွယ်​လွယ်​ကူကူ ပလာတာ နဲ့ အီကြာ​ကွေး ပဲ​ရောင်းကြတာ​ပေါ့ ။ ပလာတာက တစ်​ခြား​နေရာ​တွေမှာ လိပ်​ခုတ်​တဲ့ ။ ပလာတာ ကိုပဲနဲ့ လိပ်​ပြီး ဒါးနဲ့ စဉ်း အဲ့ ခုတ်​တာကိုး ။ ​ကျော်​တို့ဆီက ဒါးမသုံးဘူး ။ ယဉ်​​ကျေးတယ်​ ။ ကပ်​​ကျေးနဲ့ ညှပ်​တယ်​ ။ ဒါ​ကြောင့်​ လိပ်​ညှပ်​တဲ့ ။ အစား အ​သောက်​​ကြောင်းပဲ ​ပြော​နေ​တော့မလား ။ အလုပ်​အကိုင်​​ကြောင်း​လေး ​ပြောကြပါအုံး ။ ဒါမှ ​ကျော်​တို့ အလုပ်​လက်​မဲ့​လေး​တွေ ဗဟုသုတရ​အောင်